I-General Injongo Injongo kagesi amaMotors athengiswa ku-Discount Price izindleko
Okuvamile Injongo kagesi Motors intengo ehamba phambili
Izinketho Zezimoto Zogesi
Khetha ekukhetheni kwethu ama-motors kagesi. Thola i-Micro Electric motor online noma uthole eminye imikhiqizo yeSayensi & Yezifundo kithi.
Imikhiqizo yezimoto zikagesi
I-AC & DC Motors
Imoto kagesi engenamabhulashi ye-DC eyaziwa nangokuthi imoto eshintshana ngogesi (i-ECM noma i-EC motor) kanye nama-DC motors ahambisanayo. Injini yeSolenoid iyinjini esebenza ekuhambeni kwe-solenoid. Isigaba sokungeniswa sezigaba ezi-3 zilula futhi ziqinile ekwakhiweni okunokwethenjelwa okuphezulu.
Sizoxoxa ngezinhlobo ezahlukene zemoto kagesi. I-vibrationmotor isetshenziselwa ukwenza i-torque yokujikeleza emshinini. Zonke izinjini zokungeniswa zingama-asynchronous motors. Ukulawulwa kwejubane kwe-elekthronikhi noma i-ESC yisifunda se-elekthronikhi esilawula futhi silawule isivinini semoto kagesi. Ama-motors adlidliza ngokukhiqiza nokuthengisa
Isinyathelo namaServo Motors
Sineqembu elihle kakhulu lokucwaninga nentuthuko, ngalinye linamandla alo. Singezinye zezinkampani ezimbalwa eChina ezinamakhono ocwaningo nokuzimela nokuzimela. Sisebenzisa ikhwalithi. Thenga ama-motors kagesi ngamanani entengo ngesikhathalogi sethu sezimoto sikagesi esiphelele. Intengo yezimoto zomshayeli we-Microstep.
I-Synchronous Industion Motors
Sine iminyaka eminingi nakho motor yokukhiqiza kuphela ukukunika eliphezulu futhi iqine motor. Inkampani yethu ithuthukile kusukela ekukhiqizweni kokuqala kwama-motors kagesi kuze kube manje, i-linear ac induction motor split phase shaded pole capacitor start. isigaba esisodwa & isigaba sesithathu sokungeniswa kwemoto ye-squirrel cage motor.
Izinhlobo zezimoto ezisebenza ngogesi ziyathengiswa
Sithatha ikhwalithi njengenzuzo yethu futhi intengo ephansi ubuqotho. Uma unemibuzo, ungaxhumana nathi, sizojabula ukukusiza! Insizakalo yethu yamakhasimende itholakala amahora angama-24 ku-inthanethi. Singumkhiqizi wezimoto uNdunankulu we-EV. Iphothifoliyo yezimoto zikagesi i-Siemens iqukethe ama-motors aphezulu namandla aphansi. Imoto ye-brushless DC (BLDC) iya ngokuya ithandwa kakhulu emikhakheni efana neyezimoto. Ama-AC motors asetshenziswa kabanzi embonini, ikakhulukazi ngenxa yokusebenza kwawo kahle.
Umhlinzeki wembulunga yonke wama motors kagesi
Uma unemikhiqizo oyithandayo, Thenga ama-motors angcono kakhulu kagesi okudingayo futhi woza uxhumane nathi! Singakusiza ukukuqondisa kusisombululo esihle kakhulu sezidingo zebhizinisi lakho.